China BOREAS II 5 Blades Industrial Ceiling Fan Manufacturing sy Factory | Kale
Fantson-drivotra lehibe BOREAS II 7.3M HVLS Fan
BOREAS II andiam-pamokarana angovo indostrialy dia mpankafy valin-drihana lehibe misy savaivony 7,3 metatra. Ny Kale Airfoil Blades, izay amboarina amin'ny fampiharana ny fitsipiky ny aerodynamika sy ny teknolojia avo lenta, dia afaka mitondra rivotra be dia be miaraka amin'ny herin'ny 1.5KW na latsaka, miteraka faritra midadasika amin'ny rivotra voajanahary, ary milalao ny fiasa roa amin'ny rivotra sy ny fampangatsiahana.
Ny mpankafy mitsitsy angovo indostrialy BOREAS II dia mpankafy valindrihana lehibe misy savaivony 7,3 metatra! Ny Kale Airfoil Blades, novokarina tamin'ny fampiharana ny fitsipika aerodinamika sy ny teknolojia avo lenta. Ny BOREASII dia afaka mitondra rivotra betsaka amin'ny herin'ny 1.5KW na latsaka. Ny BOREASII dia manana fiasan'ny rivotra sy ny fampangatsiahana.
Indostria ara-panatanjahantena Fitness foibe, gym
Fialam-boly Valan-javaboary lehibe, zoo & arboretum, kianja filalaovana ankizy
Traffic Hub Seranam-piaramanidina, fiantsonan-dalamby haingam-pandeha, fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka, fiantsonan'ny metro, seranana
Toerana ara-barotra Foibe fampirantiana, efitrano fampirantiana fiara, tsena lehibe terminal, fivarotana lehibe.
mafy Mampiasà fitaovana matanjaka, toy ny vy sandoka, aluminium kilasy fiaramanidina, mafy & azo antoka.
mamirapiratra Mampiasà teknolojia loko fluorocarbon, manjelanjelatra be ny endriny, mamirapiratra eo ambanin'ny hazavana.
High Capacity amin'ny fampitana hafanana Nasongadina turbine rivotra-suction vokatry, fanatsarana ny hafanana-dissipation.
ela velona: Ampiasao ireo singa mahafeno fepetra indrindra, miantoka ny fiainana fanompoana mihoatra ny 15 taona.
Fancy Famokarana lehibe, avo lenta, mihena ny vidiny, raitra fa tsy lafo.
Raiso ny motera LENZE avy any Alemaina, ary miara-miasa amin'ny orinasa Alemana mba hamolavola maotera miodina ho an'ny vokatra HVLS.
1. Mampiasà dingana fivorian'ny backlash ambany sy teknikam-pitotoana fitaovam-piadiana, tabataba ambany
2. Hamafiso ny rafitry ny rafitra mitondra, hampitombo ny tombo-kase solika ary hanamafisana ny firafitry ny maotera miaraka amin'ny rafitra trapezoidal, fiarovana ambony kokoa
3. Raiso ny maotera avo lenta IE2, mitahiry 5-10% bebe kokoa noho ny IE1
4. Nandalo taratasy fanamarinana CCC, CE, UL
Ny habaka vita amin'ny 1500T Hot forging, machining fanaraha-maso isa ary machining CNC. Ny forging dia afaka manamafy ny tsy fitoviana amin'ny rafitra metaly, izay afaka mitazona ny rafitra anatiny sy ny endrika ivelany amin'ny sombin-javatra hosoka. Ny firafitry ny metaly mirindra tanteraka dia manamafy ny fananana mekanika tsara indrindra amin'ny hub. Amin'ny alàlan'ny milina CNC, ny fandeferana mazava tsara dia voafehy ao amin'ny 100um, izay miantoka ny fifandanjana mavitrika amin'ny hub.
Fanamafisana herinaratra ambony indrindra amin'ny indostrian'ny HVLS, seta elektrika marika Schneider, miaraka amin'ny maodely fiarovana fiarovana izay hanakatona ny famoahana ho azy raha misy loza.
Ny kabinetra fanaraha-maso marika Alemana, nandalo ny EMC tamin'ny alàlan'ny mari-pankasitrahana SGS sy CCC, nandritra izany, dia nandalo fitsapana manohitra ny mandady izay miaro amin'ny fomba mahomby ny fitsabahana elektromagnetika. Ny haavon'ny fiarovana dia IP55, mandalo fanamarinana UL, EMC, LVD, ROHS.
Mampiasà magnalium kilasy fiaramanidina mahery vaika avy any ivelany, PVFD voahodina eny ambonin'ny tany, ary famolavolana aerodynamika. Patent manokana vaovao Kale-Kale Airfoil Blades, misy rafitra fanohanana 3 manamafy ao anatiny, izay mampitombo ny tanjaky ny lelan'ny mpankafy ary misoroka ny fihenan'ny rambony mpankafy ary ny fatiantoka sy ny harerahana amin'ny lelan'ny mpankafy amin'ny fampifandraisana tanteraka.
MODELY Size Haben'ny rivotra Hafainganam-pandeha ambony indrindra lanjan'ny mpankafy fahefana Enta-mavesatra feno Ny haavon'ny tabataba
HVLS-D4BAA73 24ft（7.3m） 12100m³/min 60 RPM 110 kg 1.5Kw 3.2Amps/220V <40.0dB（A）
HVLS-D4BAA61 20ft（6.1m） 11200m³/min 70 RPM 97 kg 1.5Kw 2.5Amps/220V <40.0dB（A）
HVLS-D4BAA49 16ft（4.9m） 10300m³/min 70 RPM 87 kg 1.5Kw 2.5Amps/220V <40.0dB（A）
teo aloha: BOREAS III Airflow Big Ceiling Fan
Manaraka: AIRPOLE Commercial Large Pedestal / Stand Fan